IiWatchtower Farms: Ifama Eyondla Abantu Abaninzi
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTarascan IsiTigrinya IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUzbek IsiValencian IsiXhosa IsiZulu
Kwiminyaka engamashumi amane eyadlulayo, ngoFebruwari 2, 1973, kwafakwa oomatshini bokuprinta abatsha eWallkill, eNew York, eUnited States, ukuze kuprintwe iMboniselo noVukani!
Kwiminyaka elishumi ngaphambi koko, amaNgqina kaYehova athenga umhlaba ukuze awenze ifama eyayiza kondla abasebénzi abakwikomkhulu labo eBrooklyn, eNew York. Ngoku lo mhlaba wawuza kusetyenziselwa olunye uhlobo lokutya, okwakuza kufundisa abantu ngoThixo.​—Mateyu 24:45-47.
IiWatchtower Farms, eWallkill, eNew York, ngeminyaka yee-1970
UPhilip Wilcox, owayevelela umsebenzi wokuprinta ngelo xesha, uthi xa ebalisa ngosuku abaqalisa ngalo ukuprinta eWallkill: “Kwathatha isithuba senyanga ukudibanisa oomatshini bokuprinta abakhawulezayo. Sathi sakubagqiba, saqalisa ukubasebenzisa. Zange kube lixesha elide, sabe sesiprinta iimagazini ezingamawaka aliqela ngabo. Sazithumela eBrooklyn, baza bona bazithumela emabandleni. Sasingafuni nokuba kubekho imagazini engazukuhanjiswa.”
AmaNgqina kaYehova akha le ndawo yokuprinta intsha ukuze incedisane naleyo iseBrooklyn. Kwasekuqaleni kweminyaka yee-1970, imfuneko yoncwadi lweBhayibhile ibingaphaya kwenani ebelinokuprintwa ngosuku olunye, ngoko iBrooklyn ibisele isebenza nasebusuku.
Ngasentla: Kufakelwa umatshini wokuprinta eWallkill, oyi-M.A.N. press NgoJanuwari 1973. Ngezantsi: Kufakwa iphepha kwi-M.A.N. press
Xa isakhiwo sokuqala sokuprinta sagqitywayo eWallkill, sasinoomatshini bokuprinta abane, indawo yokuthumela uncwadi kunye neHolo yoBukumkani. Sekunjalo, sathi singekagqitywa, kwabe sele kuqala ukwakhiwa esinye isakhiwo esikhulu ecaleni kwaso. Imfuneko yoncwadi lweBhayibhile yayinkulu kakhulu, kangangokuba sathi singekagqitywa isakhiwo sesibini, kwabe sele kukho oomatshini abathandathu abasebenzayo kuso.
Ngenxa yokuhamba kweminyaka, neteknoloji yokuprintwa kweencwadi yayisele ihambele phambili nemfuneko yoncwadi lwethu lweBhayibhile ithe kratya. Ukuze sikwazi ukusebenzisa le teknoloji, kwafuneka sitshintshe indlela abami ngayo oomatshini size sandise indawo yokuprinta eWallkill. Ngeminyaka yee-1980, bonke oomatshini abadala bathatyathelwa indawo ngabatsha nabakhawulezayo.
Ngo-2004, indawo yokuprinta eseBrooklyn yavalwa, kwaza okokuqala, iincwadi zaprintwa eWallkill. Ngo-2010, umsebenzi wokuprintwa kweemagazini wafuduselwa kwiofisi yesebe yamaNgqina kaYehova eseKhanada. Umatshini omtsha ophaya ungakwazi ukuprinta iimagazini eziyi-200 000 ngeyure.
Ngasentla: Kulungiswa iisignatures ukuze ziye kudityaniswa eWallkill, ngo-2005. Ngezantsi: IiWatchtower Farms, eWallkill, eNew York, ngo-2013
Namhlanje, indawo yokuprinta eseWallkill izele ngoomatshini abakumgangatho ophezulu yaye inabasebénzi abayi-281. Kulo nyaka uphelileyo, kwaprintwa iincwadi neeBhayibhile ezingaphezu kwe-17 miliyoni. Ngaphezu kweendawo zokuprinta eziseWallkill naseKhanada eMntla Merika, amaNgqina kaYehova anezinye iindawo zokuprinta eziyi-13​—eziseAfrika, eAustralia, eYurophu naseNtshona Merika, nezinceda izigidi zabantu zifunde ngoThixo.​—Mateyu 5:3.
Umsebenzi Owenziwa Ehlabathini Wokuvelisa IiBhayibhile Ezinoqweqwe Oluqinileyo Uyenziwa NaseJapan